Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo Gaaray Magaalada Qardho – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya ayaa si wayn loogu soo dhaweeyay Magaalada Qardho ee deeganada Maamulka Puntland oo maalmahan socdaal uu ku maraayo.
Farmaajo ayaa dadkii ku soo dhaweeyay magaalada Qardho waxa ay uga hortageen Banaanka Magaalada, iyaga oo ruxaya calanka Somaliya iyo Sawirka Madaxweynaha.
Bulshada reer Qardho oo maalmahan isku diyaarinaayay soo dhaweynta Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta si wayn u soo dhaweeyay Farmaajo.
Suxufiyiinta la socda Madaxweynaha waxa ay soo sheegayaan in Madaxweynaha hoygiisa uu ku booqan doono Boqor Burhaan oo xaruntiisa ay tahay Magaalada Qardho.
Ammaanka Magaalada Qardho ayaa si wayn loo adkeeyay, iyadoo ciidamada Koofi Gaduuda Madaxweynaha la socota iyo kuwa Puntland ay sugayaan ammaanka.
Safarka Madaxweynaha oo mid dhanka dhulka ahaa, ayaa waxaa ku wehlinaayay Madaxweynaha Puntland iyo Xubno ka tirsan dowladda dhexe.